Mgbasa Ọha - Ọganiihu na -enweghị atụ? | Martech Zone
Tuesday, May 22, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ihe osise a na-elekwasị anya n'ọmụmụ ihe ọhụrụ site na eMarketer, Hubspot, na Social Media Taa na-etinye a pụrụ ịtụ anya ROI na-elekọta mmadụ media mgbalị.
Site na Pagemodo infographic, Successga nke Ọma A Na-apụghị urakọwa: N'ime afọ ole na ole gara aga, obere na nnukwu ụlọ ọrụ agbanweela mgbalị ha na-ere ahịa na mgbasa ozi ọha na eze, kwenyesiri ike na isonye na ndị na-elekọta mmadụ ga-anapụta ego nwere ike ịlaghachi na nkwụghachi azụ (ROI). N'ikwu eziokwu, a na-atụle ROI nke mgbasa ozi mmekọrịta - n'adịghị ka usoro ahịa ahịa ndị ọzọ - site na mmetụta ọ na -emepụta, kama nloghachi ego. N'afọ a, ndị ahịa na-ekwe nkwa ịnapụta ha abụọ. Anyị na-achọpụta ma ọ bụrụ na oge nke ezigbo ROI nwere ike ịkọwapụta na mgbasa ozi mmekọrịta dị ebe a.
M kwere na ROI na mmadụ mgbasa ozi enwere ike ị tụrụ, ma emezu ya n'ọtụtụ ọkwa. Enwere ike inwe mgbanwe ozugbo, ntụgharị ntụgharị site na ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụdị ụdị, na mgbakwunye na ntụgharị site na mmetụta ogologo oge na ikike ewepụtara n'oge. Ọ dịghị mfe ijide dollar ọ bụla enwetara site na iji usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana ịnwere ike ịchụso ihe zuru oke iji gosipụta ezigbo nkwụghachi na ntinye ego.
Mee 23, 2012 na 10: 29 AM
Azụmaahịa ọ bụla nwere ebumnuche mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche ka ọ ghara ikwe omume ịchọpụta otu nha dabara atụmatụ atụmatụ ROI niile. Businessesfọdụ ụlọ ọrụ na-echegbu onwe ha banyere itinye aka ebe ndị ọzọ na-eche banyere ntụgharị.